Janakpur News - Page 30 of 36 - Trending News Portal of Nepal
March 19, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका092
काठमाडौं, चैत ४ । सुनको मूल्य आज पनि बढेको छ । सुन आज प्रतितोला तीन सय रुपैयाँले बढेर ५४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदी भने प्रतितोला ५ रुपैयाँले घटेको छ । चाँदीको ७ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
सस्तियो खाडीको मुद्रा, रेमिट्यान्स ठप्पहुने आशंका
March 19, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका0198
काठमाडौं, चैत ४ । नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख देशहरु कतार, दुबई, साउदी अरब, मलेसियाको मुद्रा बिनिमयदर पछिल्ला दिनमा सस्तिएको छ । यसरी ति मुलुकको मुद्राले आफ्नो मूल्य गुमाउदा नेपालमा त्यसको प्रतक्ष्य असर पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि तोकेको मुद्रा बिनियमदर अनुसार, साउदी अरबको १ रियलको खरिद …
नेपाल हाइड्रोको आईपिओको प्रमाणपत्र वितरण
March 19, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका0231
काठमाडौं, चैत ४ । नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड (Nepal Hydro Developer Ltd) ले निष्काशन गरेको साधारण शेयर (IPO) को प्रमाणपत्र आजदेखि वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । बिक्री प्रबन्धकका अनुसार शेयरधनीहरुले आफूले आवेदन दिएका स्थानबाट नै प्रमाणपत्र लिन सक्नेछन् …
मेलम्ची आयोजनाले बनाएको खाल्डो तत्काल पुर्न राज्यमन्त्रीको निर्देशन
March 19, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका0154
काठमाडौं, चैत ४ । काठमाडौँको लाजिम्पाटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले बनाएको खाल्डोमा मोटरसाइकल खस्दा एकजना घाइते भएका छन् । आज बिहान चक्रपथबाट रत्नापार्क गइरहेको बा ४७ प ७४३० नं मोटरसाइकल आयोजनाले बनाएको खाल्डोभित्र खस्दा मोटरसाइकल चालक घाइते भएका हुन् । घाइतेको नाम खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ …
कोपार्डस् को यो घडीको मूल्य २५ मिलियन डलर !
March 19, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका069
घडीको काम समय देखाउने मात्रै भएतापनि बजारमा यसको फरक–फरक डिजाइन र फरक फरक–फरक मूल्य रहेको छ । बिभिन्न घडी निर्माता कम्पनीहरुले आ–आफ्नो विशेषता अनुसार ब्राण्ड बनाएका छन् । एउटा व्याक्तित्व झल्काउने ग्याजेटको रुपमा घडीलाई पनि लिइन्छ । त्यसैले धनि मानिसहरु आफ्नो स्तर देखाउनको लागि भएतापनि महँगो घडी खरिद गर्न अगाडी …
सेञ्चुरीले किन्ने भयो अल्पाइन डेभलपमेन्ट
March 19, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका0527
काठमाडौं, चैत ४ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकलाई किन्ने भएको छ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र हेटौंडामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकबीच प्राप्ती गर्ने सम्झौता (मोमेन्ड्रम अफ अन्डरस्ट्याण्डिङ) मा हस्ताक्षर भएको छ । अल्पाइनले आफ्नो पूँजीमा हकप्रद जारी गरी करिब रु. ४४ …
March 18, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका0148
केरा एउटा यस्तो फल हो जसबाट शारीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन, मिनरल्स तथा प्रोटिन प्राप्त हुन्छ । मात्रा मिलाएर खान सकियो भने केराले मानिसको तौल बढाउन तथा घटाउन मदत गर्छ । विश्वमा प्रख्यात मध्येको एक फलपनि केरा नै हो । केराको फल खाएपनि बोक्राभने फाल्ने गरिन्छ तर पाकेको केराको बोक्रा पनि …
‘मधेशीको माग सम्वोधन नभए कुनै शक्तिले निर्वाचन गराउन सक्दैन’
March 18, 2017	ओनलाईन पत्रिका, राजनीति05,535
रौतहट, चैत ५ । मधेशीको मुदालाई सरकारले समयमा सम्बोधन गरेन भने देशको कुनैपनि शक्तिको प्रयोग गरी निर्वाचन गराउन सक्दैन संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले बताएका छन । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले गणतन्त्र मुलभुत समावेशी मुदालाई संवोधन गर्न यो संविधान असफल रहेको छ । …
March 18, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका043
पाल्पा, चैत ५ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पाले चालु आर्थिक वर्षमा कृषकलाई ७३ वटा यान्त्रिक उपकरण अनुदानमा वितरण गरेको छ । कम लागतमा बढी उत्पादन दिने स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधितर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले उक्त परिमाणको कृषि उपकरण किसानलाई अनुदानमा वितरण गरिएको हो । यसरी वितरण …
March 18, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका0124
पाल्पा, चैत ५ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका पाल्पा खानीछाप गाविसका युवाले तरकारी खेती गरेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छन् । सिँचाइको उपयुक्त सुविधा प्राप्त नभए पनि कडा श्रम र मेहनतका साथ गरेको तरकारीखेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन थालेपछि यहाँका युवाले यसतर्फ आकर्षित भएका हुन । ऋण खोजेर विदेशमा आफ्नो श्रम र …